Beddelaan Oo shilin Soomaali In US dollar
UN xogta heerka sarrifka ee 24/05/2022 10:33
Oo shilin Soomaali In US dollar beddelaad. Oo shilin Soomaali qiimaha maanta ee US dollar maanta suuqa sarrifka lacagta.
1 000 Oo shilin Soomaali = 1.73 US dollar
Celceliska sarrifka. Isbeddelka sicirka sarrifka ee Oo shilin Soomaali to US dollar waxay dhacdaa hal jeer maalintii. Macluumaadka lacagta la cusbooneysiiyay. 1 Oo shilin Soomaali wuxuu kaco 0 US dollar. Marka loo eego 1 Oo shilin Soomaali hadda waxaad u baahan tahay inaad bixiso 0.001728 US dollar. The Oo shilin Soomaali sicirka doolarka Mareykanka ayaa kor u kacay US dollar by 0 boqol meelood meel barta boqolleyda.
Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali In US dollar
Usbuuc ka hor, Oo shilin Soomaali waa lagu iibin karaa 0.00176 US dollar. Seddex bilood ka hor, Oo shilin Soomaali waxaa laga iibsan karaa 0.001691 US dollar. Toban sano ka hor, Oo shilin Soomaali waxaa lagu badali karaa 0.0017 0 US dollar. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka US dollar waa ku habboon in lagu arko shaxda. -1.82% toddobaadki - isbeddelka heerka sarrifka Oo shilin Soomaali. 1.6% - isbeddelka heerka sarrifka ee Oo shilin Soomaali to US dollar sanadkii.
Bedelaha lacagaha Oo shilin Soomaali US dollar
Oo shilin Soomaali (SOS) In US dollar (USD)
1 000 Oo shilin Soomaali 1.73 US dollar
5 000 Oo shilin Soomaali 8.64 US dollar
10 000 Oo shilin Soomaali 17.28 US dollar
25 000 Oo shilin Soomaali 43.19 US dollar
50 000 Oo shilin Soomaali 86.38 US dollar
100 000 Oo shilin Soomaali 172.76 US dollar
250 000 Oo shilin Soomaali 431.91 US dollar
500 000 Oo shilin Soomaali 863.82 US dollar
Hadaad leedahay 10 Oo shilin Soomaali, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu iibin karaa 0.017276 US dollar. Waad ku iibin kartaa 25 Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 0.043191 US dollar . Waad ku badali kartaa 50 Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 0.086382 US dollar . Waad iibin kartaa 0.17 US dollar for 100 Oo shilin Soomaali. Waad ku iibin kartaa 250 Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 0.43 US dollar . Hadaad leedahay 0.86 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu badelayaa 500 Oo shilin Soomaali.
Oo shilin Soomaali In US dollar Heerka Sarrifka
Oo shilin Soomaali In US dollar maanta 24 May 2022
24.05.2022 0.001754 -7.94 * 10-5 ↓
23.05.2022 0.001833 2.91 * 10-5 ↑
22.05.2022 0.001804 0.000102 ↑
21.05.2022 0.001703 -1.57 * 10-5 ↓
20.05.2022 0.001718 -2.58 * 10-5 ↓
24 May 2022, 1 Oo shilin Soomaali kharashyada 0.001754 US dollar. 23 May 2022, 1 Oo shilin Soomaali kharashyada 0.001833 US dollar. Oo shilin Soomaali to US dollar dusheeda 22 May 2022 waa u siman yahay 0.001804 US dollar. 21 May 2022, 1 Oo shilin Soomaali kharashyada 0.001703 US dollar. Ugu yar Oo shilin Soomaali to US dollar sicirka sarrifka bishii ugu dambeysay ayaa ahayd 21.05.2022.
Oo shilin Soomaali iyo US dollar calaamadaha lacagta iyo waddamada